हाम्रै घर अगाडी रहेको यो झाडीको महत्वबारे कसैलाई थाहा छैन। यति धेरै रोगहरुको लागि फाइदाजनक हुन्छ…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
हामीलाई झारपातहरूको महत्व नै थाहा छैन । जमिनमा उमर्ने धेरै जसो झारपात औषधिय गुण भरिपूर्ण हुन्छन् ।हामी यसलाई जंगली बुट्यान ठानेर लुछेर मिल्काउँछौं ।
तर यसमा पोषण तत्त्वहरू भरपूर मात्रामा भेटिन्छन्।यो बिरुवाको स्वाद पनि गजबको हुन्छ र यसको पोषण पनि राम्रो हुन्छ । यो बिरुवामा ओमेगा ३ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । ओमेगा ३ खासमा फ्याट्टी एसिड हो र यो माछा, अण्डा र माछाको तेलमा पाइन्छ ।
यो एसिडले दिमाग तीखो बनाउँछ र हृदयघातलाई रोक्छ । तपाईं शाकाहारी हो भने त ओमेगा ३ पाउनका लागि पर्सलेन नै सर्वोत्तम विकल्प हो। पर्सलेनमा भएको एन्टीअक्सिडेन्टले तपाईंको छाला जवान राख्छ । अनि यसले शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर रोगहरूसँग लड्न पनि सहयोग गर्छयो
बिरुवा आहारमा समावेश गर्नुभएमा शरीरमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको कमी हुन पाउँदैन। तपाईंको हाड र दाँत बलियो हुन्छ।यसमा पोटेसियम पनि प्रशस्त हुन्छ । यसको पात खाँदा रक्तचाप सामान्य रहन्छ ।
यसमा आइरन पनि हुन्छ । शाकाहारीहरूका लागि आइरन पाउन मासुको साटो यही बिरुवा उपयुक्त हुन्छ।पर्सलेनमा ९३ प्रतिशत पानी हुन्छ । यसको पात खाँदा तपार्ईंको शरीर आर्द्र रहन्छ। तपाईं स्वस्थ र फुर्तिलो हुनुहुन्छ । पर्सलेनमा भएको मेलाटोनिनका कारण यो खाँदा तपाईंलाई राम्रो निद्रा लाग्छ ।
Prevकुन समयमा खाने गहुँको रोटी ? यो समयमा रोटी खाँदा हुन्छ फाइदाजनक…हेर्नुहोस् । जानकारीको लागि पूरा पढि सेयर गर्नुहोस् ।
Nextबोसो लागेर तनावमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए हरेक दिन यसरी पिउनुहोस् – ल्वांग-पानी (तरिका सहित हेर्नुहोस् )